बैंकिङ क्षेत्रमा सन्त्राष : हिमालयन बैंकको २० करोड डुब्ने अवस्थामा ! यस्तो छ कारण — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैकिङ > बैंकिङ क्षेत्रमा सन्त्राष : हिमालयन बैंकको २० करोड डुब्ने अवस्थामा ! यस्तो छ कारण
बैंकिङ क्षेत्रमा सन्त्राष : हिमालयन बैंकको २० करोड डुब्ने अवस्थामा ! यस्तो छ कारण
काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो पटक एउटा सन्त्राष फैलिएको छ । कारण हो, हमिालयन बैंकको रु २० करोड रकम करिब करिब डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । विप्रेषण कारोबारमा विवादमा परेपछि त्यस्तो समस्या देखा परेको हो ।
हिमालयन बैंक र मलेसियाको म्याक्स मनिबीच विवाद सल्टिएपनि २० करोड रकम भने नआउने भएको हो । विवादमा परेको ४९ लाख अमेरिकी डलर (करिव रु ५४ करोड )मध्ये म्याक्स मनिले हिमालयन बैंकलाई ३१ लाख अमेरिकी डलर (करिव साढे रु ३४ करोड ) भुक्तानी दिने समझदारी भएको छ ।
मलेसियामा भएको समझदारीमा बैंकका तर्फबाट अशोक राणाले र म्यास मनिको तर्फबाट हमिदविन अब्दुलाहाले हस्ताक्षर गरेका छन ।
सम्झौता कार्यक्रममा हिमालयन बैंकका महाप्रबन्धक उज्जल राजभण्डारी पनि सहभागि रहेको बैंकका एक सञ्चालकले जानकारी दिए ।
दुई पक्षबीच अझै विवादमा रहेको १८ लाख अमेरिकी डलर (करिब रु २० करोड ) सम्बन्धमा भने स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गराउने र त्यसको रिर्पोटका आधारमा कारोबार सेटल गर्ने समझदारी भएको म्याक्स मनिका हमिदविन अब्दुलाहाले जानकारी दिएका छन् ।
दुई संस्थाबीच व्यवसायिक कारोबार पुनः शुरु गर्ने समझदारी पनि भएको छ । एक वर्षअघि कारोबारमा विवाद भएपछि हिमालयन बैंकले म्याक्स मनिसँगको कारोबार भंग गरेको थियो ।
त्यतिमात्र होइन, म्याक्स मनिले हिमालयन बैंकलाई रु ५४ करोड भुक्तानी गर्नु पर्नेमा नगरेको जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले म्याक्स मनिलाई नेपालभर कारोबार बञ्चित गरिदिएको थियो ।
विवादित रकमको ठूलो हिस्सा सेटल गर्ने र पुनः कारोबार शुचारु गर्ने समझदारीमा स्वीकृति माग गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्ने पनि समझदारी भएको छ ।
दुई संस्थाबीच लेनदेनमा विवाद भएपछि उक्त विवाद केन्द्रिय बैंकसम्म पुगेको थियो । यो विवादमा राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकको पक्ष लिदै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको थियो ।
२०७६ कात्तिक २१ गते प्रकाशित
२०७६ कार्तिक २१ गते १२:३० मा प्रकाशित
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा पनि भोलि सार्वजनिक बिदा
उपत्यकाका यी चार स्थान : जहाँ आठ आनाभन्दा कम जग्गा किनबेच र नक्शापास गर्नै पाइन्न
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन संबिधान विपरीत– नेम्वाङ
आँधिखोला लघुवित्तको साधारण शेयर शेयरधनीको हितग्राही खातामा
सडकका लागि ५ करोड !
एक साता लागेको काँग्रेस मत गणना सार्वजानिक, खुल्लामा को-को जिते ?
आर्थिक बृद्धि ८. ५ प्रतिशत हुने गरी मौद्रिक नीति असारको तेस्रो साता ल्याइदै